Apple wuxuu rukhsad u siiyaa nidaam lagu xakameeyo TV-ga iyo aaladaha kale tilmaam | Wararka IPhone
Apple wuxuu rukhsad u siiyaa nidaam lagu xakameeyo TV-ga iyo aaladaha kale tilmaam ahaan
Xafiiska Patent-ka iyo Astaanta Ganacsiga ee Mareykanka ayaa hadda daabacay taxane ah 43 shatiyado la siiyay Apple toddobaadyadii la soo dhaafay. Laakiin dhammaan shatiyadaha, mid ayaa soo jiidasho leh oo ku saabsan shirkadda Israel ee ay Apple iibsatay dhowr sano ka hor oo loo yaqaan PrimeSense, taas oo wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku maamusho dhaqdhaqaaqyada, telefishanka, miiska ama aaladda adigoo si fudud u dhaqaajinaya gacmahaaga.
Nidaamkani waa mid aad u la mid ah haddii uusan la mid ahayn kan Microsoft ay ku isticmaasho Kinect, laakiin Apple Waxaan isku dayi lahaa inaan galo astaamaha 3D tikniyoolajiyaddan si aad ugu dari karto moodooyinka mustaqbalka ee Mac ama xitaa Apple TV iyo iPhone ama mustaqbalka.
Sharciga cusub ee la siiyay wiilasha Cupertino ayaa la macaamilaya isdhexgalka mashiinka aadanaha iyo isdhexgalka oo isku daraya habab badan oo isdhexgal ah isticmaalaha. Patent-ka Apple wuxuu daboolayaa hab ay ka mid tahay helitaanka khariidad saddex-cabbir ah ugu yaraan hal qeyb oo ka mid ah jirka qofka isticmaala, taasoo u oggolaaneysa la falgalka nidaamka iyada oo loo marayo dhaqdhaqaaqa madaxa iyo indhaha, iyadoo loo marayo khariidad 3D ah oo qalabkeenna laga soo saari doono. .
Isla shatigaas ayaa sidoo kale daboolaya hab ay ka mid tahay helitaanka muuqaalka isha isticmaale ee nidaamka kombiyuutarka si loo awoodo in lagu aqoonsado isticmaalaha iyadoo lagu saleynayo isha iyo awoodda. qabtaan hawlo kala duwan iyadoo kuxiran jihada aragtida, kuu oggolaanaya inaad guurto, tusaale ahaan, dulqabo jiirka adigoo indhahaaga u jeedinaya xagal gaar ah shaashadda ama si toos ah u furaya oo u xakameynaya codsiyada adoo xoogga saaraya aragtidaada iyaga.
Waxaan u maleynayaa inay weli jiraan sannado badan oo ka hor waxaan arki karnaa tikniyoolajiyaddan lagu dabaqay Mac-ga ama iPhone-ka Laakiin uguyaraan waxay ina siinaysaa tilmaan meesha hal-abuurnimadu u jiheysan doonto sannadaha soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Apple wuxuu rukhsad u siiyaa nidaam lagu xakameeyo TV-ga iyo aaladaha kale tilmaam ahaan
Haa, fadlan!: Warbaahinta Shiinaha waxay muujineysaa iPhone 7 dhab ah oo aan laheyn badhanka guriga